Bing (MSN) muturikiri
mhando 0.8.2 – 3 makore, 66 mitauro, 1 Wordpress
Kurume 6, 2012 kubudikidza chipo 21 Comments
ndati 3 makenduru pamusoro keke!
Pava nemakore matatu (uye mazuva matatu, uye maawa makumi matatu) kubvira pakutanga shanduro Transposh plugin rave aired pamusoro wordpress.org plugin dzigare mairi.
zvirokwazvo Time nhunzi.
Izvi zvave rokutanga waruka gore (29fung February) uye chaiyo munogodorerei gore pamusoro Transposh. The plugin yave paIndaneti kubva dzigare mairi pamusoro 50,000 nguva gore rino uye akaita vachiwana kukura zvinhu uye uwandu mitauro akatsigira. Uye nhasi vane kuwedzera Hmong Daw tiri plugin wokutanga kutsigira uwandu 66 mitauro.
Uyu waiva dzinonakidza here (sapamazuva, vane inonakidza upenyu) gore nokuti otomatiki shanduro indasitiri uye plugins, apo anenge Google aregedza zvavo API rutsigiro (chete kuti ufambe kusvika mari muenzaniso) apo Bing vakaisa mitemo mitsva. Transposh yakabudirira akakunda kuchinja avo, apo vamwe plugins havana kurarama.
Ko remangwana Transposh? Tiri zvishoma nezvishoma achibika zvinhu zvitsva, kushanda chiratidzo chedu kuvandudza Website rokushandura, kana zvinhu takagadzirira – vachava kunze. Zvichakadaro, kwenyu mberi rutsigiro inokosha kwatiri, dzimwe nguva zviri nyore neindaneti pamwe “plugin wenyu mukuru” isu chinoita kuti tirambe. Saka kana ukatenda tiri kuita zvakanaka, isu donha mutsetse, kana uchifunga tinofanira kuvandudza zvinhu, isu donha katsamba, uye kana uchifunga kuti isu muchayamwa, tikatadza kunzwisisa nei kuverenga mashoko aya kusvika panguva ino 😉
Achida pachedu guru 4th gore, pamwe pacho achapera mikuru keke 🙂
Ina Under: General Messages, Release zviziviso, Software Updates Tagged With: Bing (MSN) muturikiri, bhavhdhe, kuduku, mimwe mitauro, rusununguko, Wordpress plugin